BaHuThuTaGabar - Page 374 of 380 - Welcome to Bahuthutagabar
ဒီလူ ကိုယ်အပေါ် မကောင်းဘူး သစ္စာမရှိဘူးဆိုရင်…
ဒီလူ ကိုယ်အပေါ် မကောင်းဘူး သစ္စာမရှိဘူး ခဏခဏ သူကြောင့်နာကျင်နေရပြီးဆိုရင် ပြတ်ပြတ်သားသား စွန့်ခွာလိုက်ပါ လူချင်းတူပေမယ့် စိတ်ချင်းမတူကြတဲ့အတွက် သစ္စာမဲ့တတ်တာကလည်း လူတိုင်းမဟုတ်ဘူး ကိုယ်အပေါ် စွဲစွဲမြဲမြဲ ကြင်ကြင်နာနာ ချစ်တတ်တဲ့သူနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ ကိုယ်ဘဝအတွက် အရေးမပါတဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက် အချိန်ကုန်ခဲ့ပါလားလို့ နောင်တရနေပါဦးမယ် မငိုပါနဲ့ ကိုယ်ကိုမလိုအပ်တဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက် […]
“သင်စိတ်အားငယ်တိုင်း​ ဖတ်ဖို့” ၁-တစ်ရက်ရက်တော့​ သင့်ရဲ့နာကျင်​မှု့ဟာ​ သင့်ဘဝရဲ့ခွန်အားတွေ​ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ရင်ဆိုင်ပါ။ ရဲရင့်ပါ။ ၂-သင့်ကို​ မနာလို​ ဖြစ်နေတဲ့​ သူတွေကို​ ဗွေမယူပါနဲ့။ အနည်းဆုံးတော့​ သင်ဟာ​ သူတို့ထက်​ တော်တယ်လို့ သူတို့က​ ထင်ထားတယ်လေ။ ၃​-သင့်ကို​ တန်ဖိုးမထားတဲ့သူကို​ အရူးအမူး​ စွဲလမ်းမနေပါနဲ့။ ကြာလာရင်​ သင်ပါ​ […]
နာရီနှင့် လူအကြောင်း ————– ကျနော်အသက် ၆ နှစ်ပြည့်မှာ မေမေက နာရီကြည့်နည်း သင်ပေးပါတယ်။ဒီလိုသားရဲ့ လက်တံ အရွယ် ၃ မျိုး ကိုတွေ့တယ်မဟုတ်လား…? အေး…. လက်တံအရှည်ဆုံးက စက္ကန့်တံလို့ခေါ်တယ် သူကတော့ အလုပ်အများဆုံး ပေါ့…ဒါပေမယ့် သူ့ကို ဘယ်သူမှ ဂရုမစိုက်ကြဘူးတဲ့….. သူမှ မလုပ်မလုပ်ရင် […]
”ရွေးချယ်​တတ်​ပါ​စေ” ဆန္ဒနဲ့ သိက္ခာကို ​ရွေးချယ်ရတဲ့အခါ…
”ရွေးချယ်​တတ်​ပါ​စေ” ~~~~~~~~~~~ – ဆန္ဒနဲ့ သိက္ခာကို ​ရွေးချယ်ရတဲ့အခါ သိက္ခာကိုသာ ဦးစား​ပေးပါ။ – လိုချင်​တာနဲ့ လိုအပ်​တာကို ​ရွေးချယ်တဲ့အခါ လိုအပ်​တာကိုသာ ဦးစား​ပေးပါ။ – ဖြစ်​ချင်​တာနဲ့ ဖြစ်​သင့်​တာကို ​ရွေးချယ်တဲ့အခါ ဖြစ်​သင့်​တာကိုသာ ဦးစား​ပေးပါ။ – လတ်​တလော အဆင်​မ​ပြေဘူးထင်​ရ​ပေမယ့်​..နောင်​တချိန်​ ​နောင်​တ ကင်းလိမ့်​မယ်​ဆိုတာ […]
သင့်ခေါင်းထဲက ထုတ်ပစ်သင့်တဲ့အရာ ၆ ခု ၁။ သင့်ကို ဂရုမစိုက်တဲ့သူတွေကို သင်ဂရုစိုက်စရာ မလိုပါဘူး။ တစ်ချို့လူတွေက သူတုိ့ကို ဂရုစိုက်လေလေ၊ သင့်ကို ပစ်ထားလေလေပါပဲ။ ဒီတော့ သူတို့ကို လိုက်ဂရုစိုက်နေမှာထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုဂရုစိုက်ပါ။ ၂။ လူ့ခွစာများကို ဝေးဝေးက ရှောင်ပါ။ တစ်ချို့လူတွေက အခြားသူ […]
ခရစ်စတီယာနို ရော်နယ်ဒို အကြောင်း
ခရစ်စတီယာနို ရော်နယ်ဒို သူ့ကိုတော့ စီရော်နယ်ဒို ဒိုလေး ဆိုပြီး သိထားကြမှာပါ ကွင်းထဲမှာ ပြေးလွှားနေရင်း နိုင်လိုစိတ်ပြင်းထန်တဲ့ သူ့ပုံစံတွေ အသင်းကို ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ပုံတွေနဲ့လည်း တွဲပြီး မြင်မိကြမှာပေါ့ အခု သူ့အကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ ဗီဒီယိုလေးကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင် ===================== ခရဈစတီယာနို ရျောနယျဒို သူ့ကိုတော့ […]
ဒီလိုလူတွေကို ရှောင်ပါ (၁) သင့်ကို စိတ်ဓါတ်ကျစေတဲ့သူ “မင်းလုပ်ရင် ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး” ဆိုတဲ့ စကားအသွားအလာမျိုးနဲ့ သင့်ကိုစိတ်ဓါတ်ကျအောင် လုပ်တတ်တဲ့သူမျိုးဆိုရင် ဝေးဝေးကနေရှောင်ပါ။ ဒီလိုလူမျိုးတွေဆီက သင့်မှာ မျှော်လင့်စရာ ဘာမှမရှိတဲ့အပြင် သင့်မှာရှိတဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ စွမ်းအင်ကိုပါ ယုတ်လျော့ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ . (၂) သင့်ကို မလေးစားတဲ့သူ လေးစားမှုဆိုတာ […]
ရှားတဲ့ မိန်းမ… လောကမှာ မိန်းမ မရှားဘူးလို့ အော်တတ်တဲ့ တစ်ချို့ကောင်တွေ ရှေ့ထွက်ခဲ့စမ်းပါ တစ်ခုလောက် မေးကြည့်ချင်လို့ မိန်းမ ပေါတယ်ဆိုပြီး မင်းတို့ လိုချင်တိုင်း ရခဲ့ကြလို့လား? မင်းတို့ လက်ထဲမှာ ကား ဖုန်း ပိုက်ဆံရှိနေတဲ့ အချိန်ဆိုရင် မိန်းမ ပေါရင် ပေါနေပါလိမ့်မယ် ဒါပေမယ့် […]
ပရိသတ်ကြီးရေ ညပိုင်းမှာ စေ့စပ်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း အခုမနက်မှာတော့ ရွှေထူးနဲ့ ရွှေမှုံရတီတို့က သူတို့ရဲ့ facebook စာမျက်ကနေ မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာနဲ့အတူ ဆင်တူစာသားလေးတွေ ဓာတ်ပုံလေးတွေ တင်လိုက်ပါပြီနော်။ ပရိသတ်ကြီးရေ ရွှေနှစ်ရွှေကတော့ “မေး ……. ဘာ လို့ လဲ ? ဖြေ ………… ချစ် […]
အိမ်တွင်းရေး ဆူပူမှုမရှိပဲ သာယာစေချင်ရင်….
အိမ်တွင်းရေး ဆူပူမှုမရှိပဲ သာယာစေချင်ရင်▫ ဘုရားပန်းကို အညှိူးမခံပါနဲ့..သောက်တော်ရေကိုလည်း အနွေးမခံပါနဲ့.. ဂါထာတွေ မန္တာန်တွေ ပါးစပ်ကအမြုပ်ထွက်အောင်ရွတ်နေစရာမလိုပါဘူး.. ဘုရားပန်းကို အမြဲတမ်း လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်အောင်ထားမယ်… သောက်တော်ရေချမ်းကို အမြဲအေးနေအောင် ထားမယ်ဆိုရင်အိမ်တွင်းရေး အေးချမ်းပါတယ်.. အိမ်မှာအမြဲနေရတဲ့သူတွေဆိုရင် ……. မိမိရေသောက်တိုင်း ဘုရားကို သောက်တော်ရေလဲပြီးကပ်နိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်.. အဲဒီလောက်ကြီးအထိ မလဲနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှမနက်တစ်ခါ နေ့လည်တစ်ခါ […]